Nigadra herintaona, tsy manan-tahotra ilay mpanao gazety Khadija Ismayilova avy ao Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2015 17:13 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, srpski, English
Antsafa 2004 niarahana tamin'i Khadija Ismayilova navoakan'ny fantson-dahatsarin'ny Vaomiera Eoropeana.
Tamin'ny 5 Desambra, nanamarika ny herintaonany tany am-ponja noho ny fiampangana namboamboarina i Khadija Ismayilova, Azerbaijaney mpanao gazety fanadihadiana, 38 taona efa nahazo loka marobe.
Nosamborina i Ismayilova [fantatra amin'ny anarana Ismayil] tany am-boalohany noho ny fiampangana azy ho mitarika olon-kafa hamono tena. Na dia izany aza, nanaisotra ny fitoriany ny mpiara-miasa taloha an'i Ismayilova izay nametraka ny fitoriana volana vitsy taty aoriana, nanana “olana ara-psykôlôjia” izy araka ny filazany.
Na dia izany aza, mbola nijanona tany am-ponja i Ismayilova. Tamin'ny volana Febroary 2015, namoaka andiana fiampangana fanampiny ny fampanoavan'ny fanjakana Azerbaijaney, anisan'izany ny fanodikodinam-bola, ny fandosiran-ketra, ny fanaovana fandraharahana tsy ara-dalàna ary ny fihoaram-pahefana. Nahazo sazy fito taona sy enim-bolana an-tranomaizina i Khadija tamin'ireo fiampangana vaovao ireo.
Nanoratra ity tatitra ity ny Global Voices fotoana fohy taorian'ny fivoahan'ny didim-pitsarana tamin'ny raharahany:
Raha nampidirina am-ponja i Ismayilova, ho lasa gadra politika malaza manerantany indrindra ao Azerbaijan izy. Nahazo loka iraisampirenena marobe momba ny asa fanaovan-gazety izy tamin'ireo fanadihadiana nataony momba ny kolikoly ao amin'ny firenena
Herintaona taty aoriana, nanjary malaza kokoa i Ismayilova noho ny fanagadrana azy, miaraka amin’ ireo loka marobe azony ary mampiasa ny raharaha mahazo azy ireo vondrom-pisoloambava iraisampirenena hanasongadinana ny fiharatsian'ny zon'olombelona haingana dia haingana ao Azerbaïjan.
Karatra paositra “Avotsory i Khadija” avy amin'ny PEN International. Sariitatra avy amin'i Sipress, manana lisansa ho azo ampiasaina.
Hatramin'ny nisamborana azy, nahazo ny Lokan'ny Fahalalahan-gazety John Aubuchon avy amin'ny Klioban-Gazety Nasionaly ao Etazonia, National Press Club (NPC) i Ismayilova, Lokan'ny PEN Amerikana Barbara Goldsmith Fahafahana Hanoratra, ny Loka Des Forge avy amin'ny Human Rights Watch ary ny farany indrindra teo dia ny Loka “Holme-n'ny Taona” avy amin'ny gazety soedoà liberaly iray malaza. Tafiditra ihany koa ao amin'ny gazetiboky Foreign Policy izy amin'ny maha Mpisaina Mpitari-dalana Manerantany azy ny taona 2015 ary anisan'ireo mpanoratra teo notononin'ny PEN International ho ao anatin'ny lisitry ny “Mpanoratra Migadra” .
Mbola nanohy ny fampisehoana ireo fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny fikarakarana ratsy ihany izy na dia any am-ponja aza. Nandritra ny fotoana iray nihainoana azy, dia nampita hafatra tamin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminy tamin'ny fikarakarana ratsy atao amin'ireo tsy ampy taona tazonina ao amin'ny fonja alohan'ny fitsarana ao Kurdakhani izay nitazonana azy nialoha ny famindrana azy tany amin'ny fonjan'ny vehivavy andiany faha-4 tao Baku tamin'ny 27 Novambra. Nohararaotiny ihany koa ny fanagadrana azy hanasongadinana ny hakelin'ny anjara sakafon'ny tsirairay isan'andro any amin'ny fonjam-panjakana, nampisy hetsika eo noho eo raha inoana ny mpitantana fonja. Fotoana fohy taorian'io tatitra io, nihatsara avy hatrany ny sakafo tao am-ponja.
Ankoatra izany, nitohy tsy nisy azy ireo fitantaram-panadihadiana mampiseho ireo kolikoly any amin'ny sehatra avo ao amin'ny governemantan'i Azerbaijan izay nampalaza an'i Ismayilova noho ny hagoavan'ny tambajotran'ny mpiara-miasa izay nanohy ny asany.
Andro vitsivitsy taorian'ny didim-pitsarana azy, dia nandefa izao hafatra manaraka izao avy any am-ponja i Khadija :
Raha nanontany ahy amin'izay tsapako amin'ny didim-pitsarana ry zareo “izao no mendrika izany!” Migadra noho ny marina aho. Ary ny zon'ny vahoaka halalaka sy hanana fiainana feno fanambinana, ary ny hahalala ny marina dia mendrika zavatra bebe kokoa. Inona moa ny fito taona sy tapany? tsy mampatahotra ahy izany. Tsy tokony hatahotra ihany koa ianareo. Mbola manankarena bebe kokoa noho ireo lehilahy sy vehivavy mpanao kolikoly nosoratako ireo aho. Satria manana soatoavina vonona ny hanolorako hatramin'ny aiko aza aho.
Manditra izany fotoana izany ny sioka manaraka avy amin'ny filoha Ilham Aliyev nanolo-kevitra fa bizina araka ny mahazatra ao amin'iray amin'ireo firenena anjakan'ny didy jadona mpanao kolikoly be indrindra ao amin'ny firenena Sovietika taloha izany:
Eo am-pamaranana ny taona 2015 amin'ny vokatra tena tsara i Azerbaijan. Amin'ny taona 2016, hotanterahina avokoa ny fandaharan'asantsika rehetra efa nomanina.